Bụrụ Banyere Anyị - Chengdu Baishixing Science And Technology Industry Co., Ltd.
E hiwere Chengdu Baishixing na 2003 yana ọkachamara n'ịzụlite, ire, imepụta D-amino acid, amino acid echedoro, ihe nrụpụta amino acid, peptide, ogige heterocyclic, vitamin, emebere na etiti ọgwụ.
Anyị ụlọ ọrụ ọkọkpọhi ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO22000: 2005, OHSAS 18001: 2007, KOSHER, nke e depụtara dị ka sayensị na nkà na ụzụ ibu Enterprise na Chengdu na 2012. Anyị nwere 6 ịba uru nlereanya patents, 8 mepụtara PCT patents. patent mba ụwa.
Ụlọ ọrụ anyị na-arụkọ ọrụ na Mahadum Wuhan iji mepụta ngwaahịa usoro amino acid.Ugbu a postdoctor gụsịrị akwụkwọ na Switzerland na-eduga ndị otu R&D, site n'enyemaka nke prọfesọ sitere na Mahadum Wuhan, nyocha na imepụta ngwaahịa ọhụrụ yana melite usoro mmepụta ugbu a.
Ngwaahịa anyị zutere ụkpụrụ nke United States Pharmacopoeia (USP), European Pharmacopoeia (EP), na Ajinomoto (AJI) ụkpụrụ;a na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ nri, ọgwụ na ịchọ mma & omenala cell.Mgbe afọ ndị a niile raara onwe ha nye anyị wuru mmekọrịta azụmahịa na ihe karịrị 20 mba na mpaghara n'ụwa.
Mba zuru ụwa ọnụ
Sistemụ Njikwa Ogo
Site 2010 ruo ugbu a, anyị nwere ọhụrụ ule dị ka: HPLC, GC, UV spectrophotometer, electronic analysis itule, agbaze ebe mita, mmiri mita, potentiometer, oven, wdg;ọhụrụ R & D equipments dị ka: 2-50L Rotary Evaporator, 50L iko mmeghachi omume kettle, 2-10L elu mgbali mmeghachi omume kettle, friza, agụụ mgbapụta usoro, wdg, nke fọrọ nke nta ka ezuru maka àgwà ule na ọhụrụ ngwaahịa na-emepe emepe.
★Na-emejuputa njikwa usoro
★Ịchụso ịdịmma kacha mma
★Ọganihu na-aga n'ihu
★Nye ndị ahịa nsonaazụ na-eju afọ
Dl-Pyroglutamic acid, L-Glutamine ntụ ntụ, Acetyl-L-Leucine, Kemịkalụ ọgwụ, 537-55-3, L-Leucine,